Fihaonana an-tampon'ny fitantanana hotely: toerana mety tsara ny JW Marriott Bangkok
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Fihaonana an-tampon'ny fitantanana hotely: toerana mety tsara ny JW Marriott Bangkok
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao Mafana Thailand • Travel Wire News
Jona 10, 2018
Narindran'i Questex Asia Ltd ny toerana misy ny hetsika tonga lafatra - ny JW Marriott Bangkok, miaraka amin'ny hotely hotely Bangkok Peter Caprez eo an-tànana hiantohana ny fandefasana tonga lafatra ho an'ny Hotel Management Summit Bangok.
2017 dia taona faneva hafa ho an'ny fizahantany any Thailand. Iray amin'ireo firenena be mpitsidika indrindra eto an-tany. Thailand dia nandray mpitsidika dimy amby telopolo tapitrisa notapahina. Raha tsy misy hetsika manakorontana andrasana amin'ny taona 2018, manantena ny taona somary milamina ny mpandraharaha hotely any Thailand.
Misy ihany anefa ny fanamby. Famatsiana hotely tsy mitsaha-mitombo (vinavina ny CBRE fa amin'ny 2021 ao an-tanànan'i Bangkok dia hitombo 20 isan-jato).
Miaraka amin'ny fitomboan'ny fifaninanana, tontolon'ny fizarana miovaova ary fanangonana talenta sarotra. Mangetaheta fahalalana sy toro-hevitra ny mpitantana hotely. Ny fampahalalana momba ny fivoarana farany farany dia lakile hiantohana ny fitomboana mahomby sy maharitra. Tsy mora amin'ny tsena manana famatsian-drano ambony kokoa sy ny tahan'ny efi-trano antenaina ho teren'ny famatsiana efitrano vaovao.
Fihaonana an-tampon'ny fitantanana hotely
Ny fifanakalozan-kevitra momba ny tontonana dia velona sy nahaliana - lohahevitra nafana ny OTA. Nihamafy ny fifaninanana teo amin'ireo fantsona fizarana isan-karazany; mitaky fitomboan'ny ezaka ataon'ny hotely mba hitazomana ny tahan'ny fitoviana amin'ny taha. Avy amin'ny dinika any Bangkok dia misy ny mariky ny fanontaniana raha misy ny fifehezana. Azo antoka fa tsy maintsy miova ny maodelin'ny orinasa alohan'ny hanimbany.
Lohahevitra mafana iray hafa koa ny teo amin'ny F & B, ilay torolàlana Michelin voalohany tany Thailandey navoaka, niresaka momba ny fiantraikan'izany eo amin'ny sehatry ny trano fisakafoanana sy fisotroana mahery setra.
Ny vovonana Hotel Management Summit dia nametraka ny tongony ho toy ny hetsika tsy maintsy hatrehana ho an'ireo mpitrandraka hotely.